အိုးအို့အိုး !!! မျက်လုံးတွေပါ ပြူးသွားမယ် ပုံရိပ်တွေ ချပြလိုက်တဲ့ ချိုဇင်ဝင်းပြည့် – Shwe Yoe
သွယ်လျတဲ့ အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဆက်ဆီ မော်ဒယ်လ် ချိုဇင်ဝင်းပြည့် ကိုသိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ဆွဲမက်ဖွယ်ရင်သပ်ရှုမောစရာ အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ပုရိသတွေရဲ့ရင်ကို ဆွဲဆောင်ညို့ယူထားတဲ့ အလန်းစား မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။သွယ်လျ ပြေပြစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတူ လှပကြည်လင်တဲ့ အသားအရေကိုပါ ပိုင်ဆိုင် ထားပြီး ဆက်ဆီကျတဲ့ သူမရဲ့ အမိုက်စားပုံတွေနဲ့ ညို့အားပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင်နိုင်သူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Source & Photo Credit : ချိုဇင်ဝင်းပြည့် Facebook Account
သှယျလတြဲ့ အမိုကျစားခန်ဓာကိုယျလေးကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ ဆကျဆီ မျောဒယျလျ ခြိုဇငျဝငျးပွညျ့ ကိုသိကွမယျ ထငျပါတယျ။ဆှဲမကျဖှယျရငျသပျရှုမောစရာ အမိုကျစားပုံရိပျလေးတှနေဲ့ ပုရိသတှရေဲ့ရငျကို ဆှဲဆောငျညို့ယူထားတဲ့ အလနျးစား မျောဒယျသရုပျဆောငျလေးဖွဈပါတယျ။သှယျလြ ပွပွေဈတဲ့ ခန်ဓာကိုယျနဲ့အတူ လှပကွညျလငျတဲ့ အသားအရကေိုပါ ပိုငျဆိုငျ ထားပွီး ဆကျဆီကတြဲ့ သူမရဲ့ အမိုကျစားပုံတှနေဲ့ ညို့အားပွငျးပွငျး ဆှဲဆောငျနိုငျသူလေးလညျးဖွဈပါတယျ။
ပုံလေးထဲမှာ ခြိုဇငျဝငျးပွညျ တဈယောကျ ဆှဲဆောငျမှုမှုရှိရှိနဲ့ လှရကျလှနျးနတောလညျးဖွဈပါတယျ။သူမရဲ့ အမိုကျစား ခန်ဓာကိုယျအလှကတော့ မွငျသူတိုငျး ငေးလောကျအောငျကို ညို့ယူဖမျးစားနတောအမှနျပဲဖွဈပါတယျ။ခဈြပရိသတျကွီးလညျး ခြိုဇငျဝငျးပွညျ့ ရဲ့ အမိုကျစား ပုံလေးကို ကွညျ့ရှုနိုငျစရေနျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
ကြွေရက်စရာကောင်းလောက်အောင် ဆော့ကစားနေ တဲ့ ဖူးပွင့်သခင်ရဲ့အမိုက် စား ဗီဒီယို
ပရိတ်သတ်တွေ ကို မေးခွန်း တစ် ခု မေးလိုက် တဲ့ သရုပ်ဆောင် ယဉ်လတ်
အားပါးပါး !! ကြည်ကြည့်လိုက်ပါအုံး အမိစားဖြစ်နေတဲ့ အယ်လာ ရဲ့ ပုံရ်ိပ်များ
အိုးနိုးနိုး !!!! မြင်သူတိုင်း အံသြသင့်စရာ ဆက်ဆီကျလွန်းနေတဲ့ ချိုဇင်ဝင်းပြည့် ရဲ့ ဗီဒီယို